Imigaqo yeNkonzo | Martech Zone
Xa usebenzisa le ndawo, uyavuma ukuba uyayiqonda imigaqo-nkqubo yethu kwaye uyavumelana nayo.
Le ndawo ayizukubekwa tyala ngomxholo owenziwe ngumsebenzisi kunye nezinto ezenziwayo kule ndawo.
Uyavuma kwaye uyavuma ukuba yonke imixholo (okubhaliweyo kunye nemithombo yeendaba) esidlangalaleni okanye esidluliselwe ngasese luxanduva lomntu othumela umxholo, hayi le ndawo.
Le ndawo inelungelo lokongeza, ukususa okanye ukutshintsha naliphi na inqaku kule ndawo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso okanye uxanduva.
Unoxanduva lwemisebenzi yakho ekwi-intanethi kunye nokugcinwa kwemfihlo kweenkcukacha zakho.
Le ndawo inelungelo lokususa umxholo obeka ezinye iindwendwe kwimifanekiso engamanyala, ubuhlanga, ucalucalulo, ubundlobongela, intiyo, intetho engcolileyo, okanye engenaxabiso.
Indawo inelungelo lokususa iingxoxo ezikhubekisayo nezingalunganga.
Ugaxekile kunye nokuzazisa ngokucacileyo akunyamezelwa kule ndawo kwaye kuya kususwa.
Awunakho ukusebenzisa le ndawo ukusasaza okanye ukuthumela izinto ezingekho mthethweni okanye ulwazi okanye ukuthumela kwiziza ezenza ezo zinto.
Luxanduva lwakho ukujonga naziphi na iifayile ezikhutshelweyo kwiintsholongwane, iTrojans, njl.
Unoxanduva lwezenzo zakho kunye nezinto ozenzayo kule ndawo, kwaye singabathintela abasebenzisi abaphula imigaqo yethu yeNkonzo.
Unoxanduva lokukhusela ikhompyuter yakho. Sincoma ukuba ufake inkqubo ethembekileyo yokukhusela intsholongwane.
Le ndawo isebenzisa inani kubahlalutyi izixhobo zokuhlalutya iindwendwe kunye nokugcwala. Olu lwazi lusetyenziselwa ukuphucula umxholo wale ndawo.
Yonke imixholo ebonelelwe kule bhlog yenzelwe ulwazi kuphela. Umnini wale bhlog akenzi bume ngokuchaneka okanye ukugqibelela kwalo naluphi na ulwazi kule ndawo okanye olufunyenwe ngokulandela ikhonkco kule ndawo. Umnini akazubekwa tyala ngazo naziphi na iimpazamo okanye okushiyekileyo kolu lwazi okanye ubukho beli lwazi. Umnini akazukubekwa tyala ngayo nayiphi na ilahleko, ukonzakala, okanye ukonakala kumboniso okanye kusetyenziso lolu lwazi. Le migaqo nemiqathango yokusetyenziswa inokutshintsha ngalo naliphi na ixesha nangaphandle kwesaziso.